पोष्टमार्टम ल्याबको अभाव, शव बोकेर भौतारिनुपर्छ आफन्त « Janata Samachar
आश्विन ४, २०७७ आइतबार
पोष्टमार्टम ल्याबको अभाव, शव बोकेर भौतारिनुपर्छ आफन्त
हेटौंडा । हत्या, आत्महत्या, दुर्घटना जस्ता कारणले मृत्यु भएका मानिसको अनुसन्धानका लागि पोष्टमार्टम रिपोर्ट अनिवार्य हुन्छ । तर मकवानपुरमा पूर्वाधारको अभाव देखाउँदै चिकित्सकले पोष्टमार्टम नगर्दा सर्वसाधारण आफन्त गुमाउँदाको पीडा एकातिर थन्काएर शव बोकेर पोष्टमार्टम गराउन भौतारिनुपर्ने बाध्यता छ ।
पोष्टमार्टम रिपोर्टकै माध्यमबाट मृतकको मृत्युको कारण पत्ता लाग्न सक्छ । हत्यामा संलग्न व्यक्तिको पहिचान वा उसलाई दोषी ठहर गर्नकै लागि अदालतलाई पोष्टमार्टम रिपोर्ट अनिवार्य प्रमाण हो । तर हेटौँडा अस्पतालमा सुविधायुक्त फरेन्सिक ल्याब नहुँदा सर्वसाधारणलाई पोष्टमार्टमा गराउनै समस्या हुने गरेको छ । उनीहरु आफन्तको मृत्युले छट्पटाईरहँदा लास बोकर पोष्टमार्टम गराउन काठमाडौँ शिक्षण अस्पताल धाउन बाध्य छन् ।
अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरुले फरेन्सिक ल्याबको अभाव देखाउने गरेका छन् । जिल्ला अस्पतालमा फरेसिन्क विशेषज्ञको दरबन्दी नहुँदा थप समस्या भएको चिकित्सक बताउँछन् । प्रदेशको राजधानी भइसकेको हेटौँडा अस्पतालमा सुविधायुक्त फरेसिन्क ल्याब बनाउनेतर्फ ध्यान दिन सर्वसाधारणले सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेका छन् ।
२०७७ असाेज ५ गतेकाे राशिफल
दाजुभाइमा प्रेम बढ्नेछ । नयाँ ठाउमा भ्रमण हुनेछ । उत्साहले काम छिटो बन्नेछ ।
पुनर्जीवित रानीपाेखरी (फाेटाेफिचर)
पानी भर्नका लागि खानेपानी मन्त्रालयले सहयोग पुर्याएको निर्देशनालयको भनाइ छ ।
काेराेना राेकथाम : प्रयोगशाला र अस्पताल व्यवस्थापन नहुँदा समस्या
अस्पतालमा जोखिम भत्ताका लागि पठाएको रकम व्यवस्थापनमा, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा प्रयोग गरेको पाइएको बताउनुभयो ।
संस्थागत विद्यालय शिक्षक यूनियनद्वारा चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा
ईष्टुले निश्काशित शिक्षक तथा कर्मचारीलाई पुनर्वहाली गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
एक्सक्लुसिभ जनता : काठमाडौंको खोलामा मध्यरातमा…
बालुवाका तस्करहरुले खोलाबाट बालुवा निकाल्नका लागि यी मजदुरहरुलाई प्रयोग गर्ने गर्छन् ।
काेराेना राेकथाम : प्रयोगशाला र अस्पताल…
राज्यले दिने विभूषणमा खेलाडीकाे उपेक्षा
खेलाडीले दिलाएको सोही सफलताका आधारमा राखेप सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवाल भने सुप्रबल जनसेवा श्री तृतीयका लागि योग्य हुनुभयो ।
६ महिनापछि फेवातालमा डुंगा सञ्चालन शुरु
डुङ्गा सञ्चालनका लागि यात्रुसँग लिने भाडा समेत नबढाइएको उहाँकाे भनाइ छ ।
प्रेमीसँग मिलेर श्रीमानको हत्या : १४ महिनापछि भेटियो मानव कंकाल
ग्राहक बनेर मन्त्री बजार अनुगमनमा निस्किएपछि ...
सेक्स गर्ने बेलामा समेत फेसबुक चलाएपछि !
भाइरल बन्दै काभ्रेको बहुबली (तीनधारे) झरना, कसरी जाने ?
एक्सक्लुसिभ जनता : काठमाडौंको खोलामा मध्यरातमा यसरी हुन्छ बालुवाको तस्करी (भिडियोसहित )
सेल्फ आइसोलेशनमा नबस्नेलाई जरिबाना
नेकपाका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्णकालीन कार्यकर्तालाई नियमित तलब !